Iibhlog-zebhitki zeKhitshi, iipompo zokugcwalisa iibhotile, iifomthi zegumbi lokuhlambela | WOWOW
Ikhaya / Blog(Iphepha 3)
Igumbi lokuhlambela Izisombululo zoGcino oluQhelekileyo, iSithuba sokuLandisa i-3 M²!
2021 / 03 / 26 6643
Iintloko zegumbi lokuhlambela elitsha iXiaoxin Xa kufikwa kwigumbi lokuhlambela, zihlala zisona ngxaki zijolise kwindawo encinci, indawo yokugcina ayonelanga. Emva kwayo yonke loo nto, phantsi koxinzelelo lwamaxabiso aphezulu, ayisiyiyo ...
Ungawubeka njani umatshini wokuhlamba kwigumbi lokuhlambela leeMitha ezi-5? Izisombululo ezingama-35 zoyilo
2021 / 03 / 26 7025
Xiaoxin Izihloko zegumbi lokuhlambela elitsha Umatshini wokuhlamba iimpahla, sisixhobo esifunekayo ekhayeni lethu Sikhulu kakhulu, singabekwa phi? Kungenxa yokuba yonke imihla kufuneka sisebenzise umatshini wokuhlamba Oko kukuthi, ...
Ngxande, Igumbi lokuhlambela, Ubeka njani? Zama oku kuLungiswa, hayi iNkunkuma yendawo emaKhayeni amancinci
2021 / 03 / 25 6197
Imixholo yeeNdawo zokuhlambela zeNdlu yangasese Igumbi lokuhlambela ligubungela indawo encinci, kodwa ibaluleke kakhulu ebomini. Siyahlamba, ukuhlamba, ukuya kwindlu yangasese apha ukusombulula. Ke ubeko kwigumbi lokuhlambela ...
Ngaba kufuneka wenze iShift yangasese? Funda oku kuqala
2021 / 03 / 25 5376
Izihloko zeNdlu yangasese yeNdlu yangasese Ngokwenyani, kukho ezinye izindlu apho indawo yangasese ingenangqondo, nto leyo ebangela ukuba abanini badandatheke kakhulu, bafuna ukutshintsha indawo yangasese, kodwa d ...
Iingcebiso zokuGcina ezi-7, indawo encinci yandiswa kwangoko, ivulekile, ikhanya, kwaye icocekile
2021 / 03 / 24 6569
Izihloko zeNdlu yangasese yeeNdawo zokuhlambela eziphezulu Iindawo zokuhlambela eziphezulu zokuhlala zihlala zincinci, thatha indlu yomhlobo! Iseti yamakhaya amabini, indawo ebekiweyo emalunga ne-92 yeemitha zesikwere. Kodwa b ...
Yenza indawo yokuhlambela esempilweni, ingaba uyazi kangakanani?
2021 / 03 / 24 6903
Indlu yangasese yeNtloko yeeNdlu zegumbi lokuhlambela lolona qhakamshelwano lusondeleyo kunye nendawo yethu, ekunxibelelaneni nezinto zokwakha, ukusetyenziswa kweemveliso zangasese, kwaye uchukumise ukukhanya ...
2021 / 02 / 04 17834
Nokuba usuku lwakho luxakekile kangakanani, luxinzelelekile, okanye luyingxaki, ungasoloko uthembele kwisitya esikhulu sokuhlaziya kunye nokuphumla. Ewe, inkqubo yakho yompompo weshawa idlala indima kwindlela ohlaziya ngayo ...
2021 / 02 / 03 17320
Ikhitshi lakho lingaphezulu kwendawo yokuphosa kunye isidlo sangokuhlwa. Yindawo yokuhlanganisana ekhayeni lakho, kwaye kwiintsapho ezininzi, ingumthombo wobushushu kunye novuyo. Ifayiphu efanelekileyo yasekhitshini iya kugqiba ...
2021 / 01 / 16 15722
Isikolo seShishini lokuhlambela i-2020-11-15 Indawo yokuhlambela ayiyonto inkulu, ungagcina njani ngokufanelekileyo xa uhlobisa? Ufuna ukufaka ikhabhinethi kwaye ukhathazeke ngokuhlala kwindawo. Kodwa ezo ...
Nokuba igumbi lokuhlambela lingaphantsi kweemitha ezi-5 zesikwere, indawo emanzi kunye neyomileyo ayinzima ukundoyisa!
2021 / 01 / 15 16007
Isikolo soShishino lokuhlambela i-2020-11-17 Nokuba igumbi lokuhlambela lingaphantsi kwe-5 yeemitha zesikwere, ulwahlulo olumanzi nolomileyo akukho nzima ukuloyisa mna! Namhlanje ndikunika inkuthazo yokuhombisa, ukugqiba ...
Ubusika Bufikile! Ngaba ndifanele ndiyithenge i-Thermostatic Shower? Mamela kwiiNgcali, akumangalisi ukuba abantu abaninzi bafune ukutshintsha !!!
2021 / 01 / 15 15770
Ukubhekisa kwiSikolo seShishini seGumbi lokuhlambela i-2020-11-19 Ngokubhekisele kwimingxunya ekuhlangatyezwane nayo kwindawo yokuhlambela ukusuka ebuntwaneni ukuya ebuntombini, kubuhlungu ukuthetha ngaphezulu. Kwishower kwafunyanwa ukuba akukho manzi ashushu! Ngapha koko, ...
2021 / 01 / 11 17511
Isikolo soShishino lokuhlambela i-2020-11-23 Igumbi lokuhlambela njengendawo esetyenziswa rhoqo ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla. Kuyilo, ukuba awukhangeli mhle, ixesha, uya kuziva ungonwabanga. Ke ...